भाइरसबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि चीन र जापानबीच सहकार्य गर्ने सहमति
टोकियो : जापान र चीनका विदेश मन्त्रीहरुबीच महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । भाइरसका कारण नराम्रोसँग प्रभावित द’वै देशको अर्थतन्त्र उकास्न साझेदारी गर्ने बारेमा पनि सहमति भएको छ । जापान भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र उनका जापानी समकक्षी तोसिमिचु मोटेगीले दुवै देशबीच व्यावसायिक यात्रा पुनः शुरु गर्ने निर्णय भएको छ ।
विश्वमा हाल चीन दोस्रो तथा जापान तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुक हुन् । जापान र चीनबीच यसै महिनाको अन्त्यदेखि व्यावसायिक यात्रा शुरु हुनेछ जहाँ व्यापारिक एवं व्यावसायिक व्यक्तिहरुका लागि १४ दिने क्वारेन्टाइनका नियम लागू हुने छैनन् । जापानले यस्तै नियम सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र भियतनामका लागि लागू गरिसकेको छ । यद्यपि, जापानमा पछिल्ला दिनहरुमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर केही बढेको छ ।
सरकारले रोग नियन्त्रण र आर्थिक कृयाकलापलाई सँगसँगै लैजाने नीति अबलम्बन गरिरहेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भेटपछि जापानका विदेशमन्त्री मोटेगीले भने, “नयाँ सहमतिहरुले जापान र चीनबीचको व्यावसायिक सम्बन्ध अघि बढाउन निकै योगदान गर्नेछ । जापान–चीनबीचको स्थायित्वले दुई देशबीच मात्र नभई यस क्षेत्रकै लागि यो उपयोगीसिद्ध हुनेछ ।”
कोरोना भाइरस महामारी फैलिनुअघि जापान भ्रमण गर्ने विदेशीहरुमा चिनियाँ नागरिकको संख्या सबैभन्दा बढी थियो । दुई देशबीचको सम्बन्ध खासगरी भूमि विवाद र युद्धकालीन इतिहासलाई लिएर संकटमा पर्ने गरेको छ । तर पछिल्ला केही वर्षदेखि दुबै देशबीचको सम्बन्धमा व्यापक सुधार आएको छ ।
चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध शुरु भएपछि चीन र जापानबीचको सम्बन्धमा अझ सुधार आएको छ । अमेरिकाका एउटा प्रमुख मित्रराष्ट्रका रुपमा रहेको जापानले चीनलाई अहिले मुख्य व्यापारिक साझेदारका रुपमा लिन थालेको छ । जापानले चीन र अमेरिका दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने कठिन चुनौती छ ।
मेगा बैंकको नाफा ३७.२८% ले बढ्दा अन्य सूचकहरु कस्ता ?
प्राइम बैंकको नाफा ३९.४०% ले बढ्यो, वितरणयोग्य नाफामा पनि आकर्षक वृद्धि
एनआइसी एसिया बैंकको खुद नाफा २ अर्ब भन्दा बढी
एनएमबि बैंकको नाफा ४७.६९% ले बढ्दा बाँड्न मिल्ने कमाई कति ?
नबिल बैंकको खुद नाफा घट्यो, दोस्रो त्रैमासमा अरु के–के भयो ?
ग्लोबल आइएमई बैंकको नाफा २ अर्ब माथि हुँदा अधिकांश सूचक तगडा